विपरीत Phyllotaxy: संरचनात्मक सुविधा र बोट उदाहरण
शूटिंग मा पात chaotically छैन अवस्थित छ। संयंत्र अक्ष को aboveground भागहरु आफ्नो संलग्न, केवल केही क्षेत्रहरु, नोड्स भनिन्छ हुन्छ यसको आफ्नै नियम छ। यस लेखमा हामी विपरीत पक्ष बाट साथ के Phyllotaxy हेर्न हुनेछ।
पात प्रबन्धको प्रकार
पात व्यवस्था वा phyllotaxis, स्टेम गर्न पात संलग्न एक निश्चित क्रममा उल्लेख। यो सुविधा एक महत्वपूर्ण taxonomic सुविधा छ। नियमित (सर्पिल), verticillate (घेरा) र साथ विपरीत पक्ष Phyllotaxy देखि: तीन आधारभूत प्रकार हो।
एक नोड देखि पहिलो मामला मा केवल एउटा पाना प्रस्थान। प्रत्येक अन्य सापेक्ष, तिनीहरूले एक सर्पिल मा प्रबन्ध छन्। यस्तो बोट उदाहरणहरू नासपाती, गुलाब, आरु र गहुँ छन्। नोड को whorled प्रकार दुई भन्दा बढी पात गर्दा प्रस्थान। यो Phyllotaxy पाइन, काग आँखा, सरू, elodea अवलोकन गर्न सकिन्छ।
पात व्यवस्था विपरीत सुविधाहरू
विपरीत प्रकार दुई पात नोड द्वारा विशेषता छ। यस मामला मा आपसमा विपरीत अवस्थित छ। परिणाम सूर्यका अधिकतम प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ जो मोशाको एक प्रकारको छ। विपरीत Phyllotaxy whorled को एक विशेष मामला मानिन्छ। तिनीहरूले एक औसत ठाडो विमान छन् भनेर दुई प्लेट एक नोड मा अवस्थित छ।
विपरीत पक्ष बाट साथ केही बिरुवाहरु मा Phyllotaxy
स्वाभाविक, स्टेम मा पात को व्यवस्था क्रम छैन बोट को taxonomic स्थिति निर्धारण गर्ने मात्र सुविधा छ। तर उहाँले सधैं प्रजाति वर्णन गर्न गरिन्छ। यसरी, विपरीत Phyllotaxy को परिवार Honeysuckle, Labiatae र ल्वाड़ सदस्यहरू लागि विशिष्ट।
यी को पहिलो Cranberry, elderberry, Honeysuckle, musk घाँस, trehkostochnik, snowberry, Linnaeus, diervilla समावेश गर्नुहोस्। परिवारको संरचना Labiatae, Lamiaceae वा टंकशाला, तुलसी, ऋषि, बाम, thyme, कुठरा, दिलकश समावेश गर्नुहोस्। तिनीहरूलाई को भन्दा herbaceous बिरुवाहरु छन्। नाम Labiatae परिवार किनभने फूल को उपस्थिति को प्राप्त छ। तिनीहरूले खुला मुख जस्तै हुन्।
घाँसदार पनि बहुमत छ ल्वाड़ परिवार। तिनीहरूले forage र Ornamental बिरुवाहरु रूपमा प्रयोग गरिन्छ, र केही औषधी प्रयोग गरिएको छ। यो Silene, saponaria, डन, spergula, Sandman।
यसैले, नोड्स विपरीत मा विपरीत पात व्यवस्था प्रत्येक अन्य दुई प्लेट छन्। ल्वाड़, Honeysuckle र yasnotkovyh बिरुवाहरु को यो संरचनात्मक सुविधा विशेषता।
को चकमक के हो? अर्थ
पारिस्थितिकी बच्चा: पाठ रोचक बनाउन कसरी?
को XXI सताब्दी को सानो कालो पोशाक
स्वास्थ्य र सौन्दर्य क्लिनिक Podolsk